China U ụdị waya emepụta na suppliers | Ngwongwo Shoufan
U-ekara waya na-eji ọkara-ala carbon ígwè waya dị ka akụrụngwa, na ngwaahịa na-kpudo U-udi site technology, nke bụ adaba maka bundling na-azọpụta oge. U-ekara njupụta nwere ike kpam kpam na-achịkwa, na kpọmkwem size bụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
U Wiredị Waya
U-ekara waya na-eji ọkara-ala carbon ígwè waya dị ka akụrụngwa, na ngwaahịa na-kpudo U-udi site technology, nke bụ adaba maka bundling na-azọpụta oge.
U-ekara njupụta nwere ike kpam kpam na-achịkwa, na kpọmkwem size bụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
The u ekara waya nwere elu elu gloss, kpaliri U ekara waya na zinc oyi akwa bụ edo, ike adhesion, na corrosion eguzogide; Cokwanyere ntekwasa U-ekara waya nwere ike mgbatị siri ike na mgbochi-cracking, nke meriwo dum nabatara na-ewu ụlọ ọrụ.
Ihe: obere carbon nchara waya Q195
E ji mara: elu nwere ezigbo gloss, zinc oyi akwa edo, ike adhesion, na-adịgide adịgide corrosion-eguzogide ike.
Nhazi ọkwa: nwa annealed U-yiri waya, galvanized U ekara waya, na-enwu gbaa U yiri ekara, plastic-ntekwasa (PVC) U-yiri waya, igwe anaghị agba nchara U-ekara waya, wdg
Obosara: 0.5mm-1.5mm, ogologo 250mm-600mm.
Enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
The u-ekara waya na-bụ-eji maka njikọ nke rebar na-ewu ụlọ ọrụ
Jiri: a na-ejikarị ya dị ka waya nkịtị na-ewu ihe, ma ọ bụ jiri ya maka ihe ndị na-ejikọta ma ọ bụ ihe eji eme kwa ụbọchị.
Usoro nkwakọ ngwaahịa: A na-etinye ya na katọn, ya bụ, ngwaahịa silk U na-agbakọta n'ime obere filaments. A na-ahọrọ katọn na ihe nkiri plastik dịka ogologo na ọkpụrụkpụ nke aka ọ bụla. A na-emeghe ihe nkiri plastik ahụ na katọn ahụ ma tinye waya a na-ejikọta n'otu n'otu, dozie ha nke ọma, wụnye ha nke ọma, ma jupụta ha; mgbe ha zuru, jiri ihe nkiri plastik mechie ha nke ọma, fụchie ihe nkiri plastik ndị ahụ gabiga, ma mesịa jiri eriri plastik mechie ha.
Mbukota: 20kg / katọn, 1000kg / pa, n'ime plastic hessian ákwà n'èzí ma ọ bụ kpaa ákwà n'èzí, ma ọ bụ dị ka ndị ahịa 'chọrọ
25cm-65cm ma ọ bụ dị ka ndị ahịa '
Nke gara aga: Nnennen bee waya
Osote: Cokwanyere ntekwasa waya